Social Media O Marketing Marketing? Semalt Esperto Spiega Ciò Che È Meglio Per Il Tuo Business
Hazvisi nyore kuwana vanhu vachitarisa TV sezvavaiwanzoita munguva yakapfuura. Vanhu vaduku vanoona zviri nyore kwazvo kushandisa terevhizheni kugovera zvigadzirwa kana kuti kukanda kubva kumashare avo. Chikonzero chacho ndechokutihavasisiri kuda kutarisa mitambo kana purogiramu yekambo yakazara nezvizivo - wheat moisture at harvest.
Ivan Konovalov, Mutungamiriri weKuteresi Achibudirira we Semalt Digital Services, inosanganisira kusiyana kwakakosha pakati peTV uye social media marketing.
TV Ads and Cord Cutting
Vanhu vashoma vanoita sevanofarira izvo zvinoenderera mberi paterevhizheni. Smartphones ane inowanzoshandiswa zvakanyanya kuti terevhizheni inogona kuenda isingaoneki kunyange kana iripo. Smartphone inopa vashandi mukana wekutarisa pafoni dzavo.Apo terevhizheni inotanga kuendesa mberi zviziviso, zvinonyanya kuitika kuti vashandisi vanovatsinhanisa, vashandura kuenda kunoshambadzira, kana kudzokera kwavarimafoni efoni.
Zvinyorwa zvepaPasipura zvakasimudzira mafirimu akaisa mapevhizheni. Pachikamu chimwe nechimwe, vanhu vaifunga kuti chimwe nechimwe chinoshandiswa chinogona kukanganisa iyo yakatangira. Zvisinei, sezvazvakanga zvakadaro, kusimudzirwa kwehupfambidzani hakusi zvachose yakakanganisa kudiwa kweterevhizheni. Nhau dzezvemagariro evanhu dziri kuparadzanisa zvakanyanya mumashandisirwo emiterevhizheni, zvichiita kuti kuchinja kweparadigm kudijiti.
Dhidhijoni neTV Kukura
Dhidhidha yekushandisa mari yakashandisa mari yekushandiswa kwepaTV gore rapera ne $ 72.09 mabhiriyoni$ 71..29 mabhiriyoni zvichienderana. Maererano neMarketer, mari yekushandisa yedhigiri yakagadzirirwa kuti ive negore pagore kukura kwe $ 10 mabhiriyoni achienzaniswa neTV $ 2 bhiriyoni.
Kubatana pakati pemidzimu miviri ndeyekuti ivo vari vaviri vari kukura. Kunyange zvakadaro, iyo digital media inotora zvimwe zvinotangira. Chinhu chakakanganiswa pane zvishandiso chinowanzotanga paTV asi chinopedzisira pane sangano rekushambadzira sechinhu chinobva yemamwe mari.
The Shift by Advertisers to Digital
Adidas Mutungamiri Mukuru Kaspar Rorsted akasimbisa kuti vanhu vanofungidzirwa vari kutamira kune digital kuburikidza nekuudza CNBC nezvekuti vashandi vavo vaduku vanobatana navo sei pane zvigadzirwa zvefoni. Digital engagement, naizvozvo, inoshanda sechinhu chinokosha kwavari. Adidas nekuda kweizvozvo akasarudza kuwedzera kushandiswa kwedhijita mumakore mana anotevera. Poshizve nzira dzekubudirira ndezvekuita nekubatanidzwa kwehutano izvo vashandi vanogona kurondedzera.
Zvisinei, mamwe makambani akadai seTaco Bell anoita seanoita maererano nemamiriro ayakudzokera shure kune redhiyo neterevhizheni. Mukukurukurirana neCampaign, SMO Marissa Thalberg vakati iyo kambani yakave yakagadzikanazvinoguma nehuwandu hwavo hwekutsvaga kwekutengeserana, vachitsvaga kuti havasati vambosangana zvinangwa. Kunyange zvazvo vachiita sokuti vari kupesana nezvinoitika, iyo inoshanda semukana webhizimisi kwavari, kunyanya kune vakwegura vatengi vese, semushamba mutsva.
Mari yakawanda haibvumiriri kubudirira, uye kuisa kuisa mari kune zvosedhijitori isina kodzero yakarurama isina kukanganisa kukuru.
Adapt kana Die: Agility mu Mubvunzo
Zvichipa kuti vatengesi vedhijititi vanozviita nenzira yakarurama, pane zvakanaka mikana yekukura. Nhamba dzinoratidza kuti vanhu vanoisa kudhinda kwekudhijita pamusoro pemishandirapamwe avo vanoona zviri naniuye munguva yakanyorwa, zvichienzaniswa nedzimwe nzira dzetsika. Nezvo zvakati, izvi zvinoshanda chete kana vanhu ava vachigadzira zvakasiyana-siyana, izvoinobata mutengi pamusana pekukosha kwayo, uye inoita kuti iwanike pane zvishandiso zvinotarisirwa nevateereri vezvinangwa.
Vatengesi vanowana rubatsiro rwemagariro evanhu mukana mukuru wekutaurirana nevatengi.Inopawo mutero wekambani iyo inotora kubhadhara kuti isashambadzire. Kana mutengesi asingagoni kuwana mikana iyi, ivo vachadarokwete kungosiya kurasikirwa kwevatungamiri asiwo kumira kwete kuvawana pakutanga.